Dib u eegida Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart 2022 - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Dib u eegida Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart 2022
Isha sawirka: upstart.com
Upstart waa madal wax amaahisa oo waliba adeegsata waxa aad ugu yeerto "A. I” oo sidoo kale loo yaqaan Sirdoonka Artificial, kaas oo ah in la horumariyo helida credit credit la awoodi karo.
Waxay ku taal California iyo shaqaalihii hore ee Google ayaa aasaasay sanadka 2012. Upstart sidoo kale waxay khuseysaa Sirdoonka Artificial si loo hubiyo hoos u dhaca khataraha amaahda iyo kharashyada la-hawlgalayaasha bangiga Upstart.
Dhexdhexaadinta amaahinta waxay xaqiijisaa bixinta deymo shaqsiyeed aan la hubin oo u dhaxaysa $1,000 ilaa $50,000 amaah bixiyayaasha meel kasta oo Maraykanka ah, marka laga reebo West Virginia ama Iowa.
Waxaa laga yaabaa inaadan si buuxda u fahmin waxa ay matalaan Amaahda Shakhsiyeedka Upstart adigoon dib u eegis ku samayn Tilmaamaha ugu Fiican iyo dib u dhacyada:
Baadhid: 10 Shirkadaha Amaahda Warshadaha leh Caymis
Amaahda Shaqsiyeed ee Upstart Tilmaamaha ugu Fiican
Maalgelinta maalinta xigta
Upstart wuxuu sheegaa 99% codsadayaasha waxay si dhab ah u doortaan inay qaataan amaahdooda 5 galabnimo
Waqtiga bari Isniinta ilaa Jimcaha hubaal waxay helayaan lacagtooda hal maalin oo shaqo.
Marka loo eego sharciga Federaalka, ka-saariddu waa deymaha loogu talagalay kharashyada waxbarashada, kuwaas oo si cad ugu xiran saddex maalmood oo shaqo.
Hubi Sidoo Kale: Waa maxay Doorka Qoraalka amaahdu?
Looma baahna taariikh credit
Upstart waxay siisaa deyman deyman la'aan dhibcooyin deyman ah, kuwaas oo laga yaabo inay ku adagtahay deyman bixiyayaasha dhaqanka.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay wax yar ama aad u liidata taariikhda deynta, deyntaadu waxay u badan tahay inay noqon doonto kharash aad u badan.
Arag sidoo kale: Amaahda Maaliyadeed ee Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2021
Majiro Ganaax Lacageed
Waxaad dooran kartaa inaad dib u bixiso dhammaan ama qayb ka mid ah deyntaada mar kasta adoon lagu dalacin wax lacag ah.
Dib u dhaca Deyn Shaqsiyeed ee Upstart
Khidmadaha asalka ah
Upstart waxay meesha ka saaraysaa khidmadda asalka ah ee hal mar, taas oo qiyaastii ah 8% dakhliga amaahdaada ka hor markaad hesho - taas oo aan sinaba loo soo celin karin.
Ma jiro saxiixayaal
Upstart ma aqbali doonto mana aqbali doonto la saxiixayaasha oo kaliya waxay qaadan kartaa macluumaadka gaarka ah ee amaahiyaha si sax ah inta habka codsigu socdo.
Wada-saxiixayaashu waxay ku taageeri karaan dayn-qaatayaasha leh taariikh deymo xadidan ama liidata si ay u helaan dulsaar wanaagsan ama ka weyn.
Si aad si fiican u fahamto Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart, su'aalaha soo socda waxay u baahan doonaan jawaabo:
Sideed u isticmaali kartaa Amaahda Shaqsiga ee Upstart?
Sidee buu Upstart u shaqeeyaa?
Waa maxay Shuruudaha, Kharashyada iyo Shuruudaha Amaahda Shaqsiyeed ee Bilawga ah?
Sideed ugu qalmi kartaa amaahda Upstart?
Waa maxay buundada credit aad u baahan tahay Upstart?
Upstart ma yahay mid sumcad leh?
Sidee buu u yahay adeegga macaamiisha?
Waa maxay qaar ka mid ah astaamaha khadka tooska ah ee Upstart?
Sideen U Isticmaali Karaa Amaahda Shakhsiyeed ee Hore?
Waxaad isticmaali kartaa deymaha shakhsi ahaaneed ee Upstart ee aan la ilaalin ee $1,000 ilaa $50,000 oo leh heerar deggan 7.86% ilaa 35.99% wax kasta.
Heerarka iyo ugu yaraan way ku kala duwan yihiin gobolka, laakiin celceliska deynta saddexda sano ah ee Upstart ay bixiso waxay leedahay APR 25.42% iyo 36 bixinta bishii $ 37 $ 1,000 kasta oo la amaahdo.
Isticmaalka Amaahda Guud waxaa ka mid ah:
In la isku daro kaarka deynta cutubka iyo deymaha kale.
Bixinta kharashka guuritaanka.
Si loo maalgeliyo hagaajinta guriga.
In la daboolo kharashaadka caafimaadka.
Bixinta dhaqaalaha arooska.
Bilawga ama balaadhinta ganacsiga.
Amaah-qaadayaashu uma isticmaali karaan deymaha:
Ku bixi kharashaadka waxbarashada meelaha sida California, Connecticut, Illinois, Washington ama Washington, DC
Samee maalgelinta hawlaha sharci darrada ah, sida iibsashada daroogada.
Amaah Raadiyaha Shakhsi ahaaneed
Dooro deynta aad rabto, qaddarka iyo ujeedada deynta, kala duwanaanshaha dhibcaha deynta, iyo gobolkaaga si aad u aragto qiimeyn adag ee heerarka boqolkiiba boqolleyda iyo shuruudaha deynta.
Kahor intaadan dooran inaad amaahato, waxaad ku xaqiijin kartaa heerkaaga mareegtooda adigoon waxyeello u geysan dhibcahaaga deynta.
Waxay ku saleyn doonaan qaddarka deyntaada deyntaada, dakhliga iyo macluumaadka kale ee ku jira codsigaaga, sida waxbarashadaada, khibradaada shaqo iyo taariikhda credit.
Haddii aad diyaar u tahay inaad buuxiso arjiga, kaliya ogow in nidaamku ku kala duwanaan doono dayn-bixiye. Wada-hawlgalayaasha Upstart ee leh bangiyada waxay la jaanqaadaan amaah-bixiyeyaasha bixinta amaahda, iyo deyn bixiye kastaa wuxuu leeyahay shuruudihiisa.
Inta badan amaah-bixiyeyaasha ayaa wici doona macluumaadka sida magacaaga, cinwaankaaga iyo lambarkaaga Sooshal Sekuuritiga si ay u sameeyaan jeegaga deynta. Deyn-bixiyeyaasha qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku qasbanaadaan inay weydiiyaan canshuur celinta, jeegagga lacag bixinta, qoraallada dugsiyada ama buundooyinka SAT.
Marka ay aqbalaan deyntaada oo aad hesho oggolaansho, waxaad hadda ku heli kartaa lacagtaada in ka yar 24 saacadood.
Sidoo kale, ogow in deyntu ay qaadan karto ilaa hal bil si loo maalgeliyo, iyo deymaha waxbarashadu waxay ku baaqayaan muddada sugitaanka ugu yaraan saddex maalmood oo shaqo ka hor intaadan maalgelin, sida uu qabo sharciga federaalka.
Amaahda Upstart waxay leeyihiin dulsaar ka bilaabma 7.86% ilaa 35.99%. Amaahda sidoo kale waxaa ku jiri kara khidmadaha soo socda:
Waxa aad ugu yeedho khidmad asal ah ilaa 8%.
Kharash bixinta soo daahday oo ah 5% ee lacagta la daahday ama $15, hadba mid ka weyn, dhacdo kasta.
Jeeg dib loo celiyay ama kharashka soo celinta ACH ee $15.
Kharash hal mar ah oo ku dhow $10 si aad u hesho nuqul adag halkii aad ka heli lahayd nuqullada jilicsan ee diiwaannadaada.
Upstart wuxuu ugu baaqayaa amaah-qaadayaashu inay dib u bixiyaan amaahda 36, ​​60 ama 84 qaybood oo bille ah, taasoo ku xidhan shuruudaha deynta ee aad doorato.
Taasi waxay tidhi, waxaad horay u bixin kartaa deyntaada ganaax la'aan.
Sideed Ugu Qalmi Kartaa Amaahda Hore?
Haddii aad rabto inaad u qalanto amaahda shakhsi ahaaneed ee Upstart, waa inaad:
Ku noolow meel kasta oo Maraykanka ah marka laga reebo West Virginia ama Iowa.
Noqo ugu yaraan booska 19 ee Alabama iyo Nebraska iyo ugu yaraan booska 18 meel kale.
U samee cinwaan iimayl sax ah, magac la xaqiijin karo iyo lambarka Bulshada.
Hayso il dakhli oo joogto ah iyo xisaab bangi oo Maraykan ah.
Amaahiyeyaashu waa inay lahaadaan buundooyinka buundooyinka ugu yaraan 580 laakiin sidoo kale waxay noqon karaan kuwo la akhriyi karo iyada oo aan lahayn taariikh credit oo ku filan si loo soo saaro dhibcaha FICO.
Qodobka xusidda mudan ayaa ah in warbixintaada dayntu aanay yeelan karin xisaab-ururin ama xisaab ururin, xaddigii la dhaafay, xisaabaadka ururinta 3-dii sano ee la soo dhaafay, ama kharash-bixin, marka laga reebo haddii ay ka hooseeyaan xuduudo gaar ah.
Ma ahayn inaad si sharci ah u caddayn ama aanad aqoonsan xaaladda khasaaraha qof ama hay'ad ama diiwaannada kale ee dadweynaha ee ku jira warbixinta deyntaada hal sano gudaheed. Marka laga reebo haddii la bixiyo xukunnada madaniga ah ama jeebka cashuurta la bixiyo.
Sidoo kale, waa inaad haysataa wax ka yar 6 weydiimo credit, kuwaas oo aan ku jirin kuwa 6 bilood ee la soo dhaafay ee amaahda, amaahda ardayda ama amaahda baabuurta.
Upstart waxay xaqiijin doontaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyo macluumaadka deynta inta habka codsiga uu socdo adigoo isku dayaya inaad ka hesho warbixinta deynta ugu yaraan hal xafiis oo deyn ah. Waa inaad sidoo kale u sameysaa wax ku saabsan taariikhdaada waxbarasho, waayo-aragnimadaada shaqo iyo waxaad damacsan tahay inaad u isticmaasho lacagaha.
Qadarka deynta aad xaq u leedahay kuma xirna deyntaada oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay ku xiran tahay meesha aad ku nooshahay. Amaahda Upstart waxay u dhaxaysaa $1,000 ilaa $50,000, in kastoo ugu yar ee gobolku khuseeyo.
Waa maxay buundada credit ee aad u baahan tahay?
Dhibcaha credit ee u hooseeya sida 580 waxay u qalmi kartaa amaahda Upstart, laakiin markaa, hoos u dhigida dhibcaha deyntaada, waa qaali qaali ah deyntaada.
Si kastaba ha ahaatee, dhibcaha dayn-qaadku maaha waxa kaliya ee amaah-bixiyeyaashu ay baadhaan. Amaahiye kastaa wuxuu leeyahay nidaamkiisa si uu u qiimeeyo deymaha, laakiin badankoodu waxay eegaan taariikhda deynta, laga bilaabo deynta ilaa saamiga dakhliga - boqolkiiba dakhligaaga bisha ah ee aad doorato inaad ku bixiso bixinta deynta - iyo kharashyada.
Xagee ka shaqeeyaa Upstart?
Waxay meel walba ka heli karaan amaahda Upstart marka laga reebo West Virginia iyo Iowa.
Xafiiska Better Business Bureau wuxuu bixiyaa qiimayn sare oo Upstart ah, laakiin shirkadu waxay sidoo kale helaysaa dhibco ah 1.63 marka loo eego 5 xiddigood sababtoo ah 41 macaamiisha dib u eegistooda.
Upstart waxay kasbatay qiimayn cajiib ah oo ah 4.9 5ta xidigood ee Trustpilot sababtoo ah in ka badan 7,600 dib u eegis.
Xafiiska Ilaalinta Maaliyadeed ee Macaamiisha ayaa diiwaangeliyay in ka badan 20 dacwooyin sanadka 2020 ee ku saabsan deymaha gaarka ah ee Upstart, iyo dhammaan cabashooyinka waxay heleen jawaab waqti ku habboon marka laga reebo hal.
Cabashooyinka caadiga ah waxay ku saabsan yihiin dhibaatooyinka marka la isku dayayo in la bixiyo lacag, macluumaad khaldan ayaa ka muuqda warbixinnada deymaha iyo marka qofka lagu soo dalaco dulsaar lama filaan ah ama khidmadaha.
Sidee buu yahay adeegga macaamiisha Upstart?
Amaah-qaadayaashu waxay leeyihiin habab kala duwan oo ay ku gaaraan Upstart: waxaad u diri kartaa fariin adiga oo isticmaalaya foomka xiriirka onlaynka, wac ama iimayl u dir.
Haddii aad rabto inaad qof kale kula hadasho taleefanka, Upstart waxay bixisaa taageero guud oo macaamiisha ah laga bilaabo 9 subaxnimo - 8 galabnimo wakhtiga bari, 7 maalmood todobaadkii.
Waxay bixiyaan taageerada lacag bixinta laga bilaabo 9 subaxnimo - 9 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha iyo midigta 10 subaxnimo - 7 galabnimo Sabtida.
Waa maxay Qaar ka mid ah Tilmaamaha Onlaynka ah ee Upstart?
Habka codsiga Upstart, laga bilaabo xaqiijinta heerkaaga ilaa oggolaanshaha deynta, waxaad sidoo kale ku buuxin kartaa onlayn. Laakiin codsadayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay hadda ku hubiyaan macluumaadka taleefoonka si loogu daro taxaddarrada amniga.
Waxaad si dhab ah u bixin kartaa lacag-bixinno, waxaad ku beddeli kartaa lacag-bixintaada bisha, taariikhda, ama jadwalka lacag-bixinta soo noqnoqda ee khadka onlaynka iyada oo loo marayo dashboard-ka amaahaha.
Dashboard-ka khadka tooska ah wuxuu sidoo kale soo bandhigi karaa waajibaadkaaga hadda, oo ay la socdaan tilmaamaha ama caddaynta sida aad u dalbanayso lacag-bixintaada.
Waxa kale oo aad ogaan doontaa inta ku jirta jadwalka iyo waxa la sameeyo haddii akoonkaaga uu dhaafo la filayey.
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Amaahda Shaqsiyeed ee Bilowga ah?
Upstart ma ku dalacaa ujrad ama ganaax?
Maya, ma jirto wax lacag ah ama ganaax ah inaad horay u bixiso. Iyada oo loo marayo dashboardkaaga Upstart, waxaad samayn kartaa lacag-bixin hore ama dheeraad ah.
Upstart ma samayn karaa ka reebis xaaladaha gaarka ah?
Nasiib darro, ma samayn karaan wax ka reebis ah u-qalmitaanka ama shuruudaha credit ugu yar si gaar ah. Waxaad ogolaatay inaad dib u codsato haddii xaaladaadu isbedesho mustaqbalka. Waxaad sidaas ku samayn kartaa adigoo ku codsanaya ciwaanka iimaylka gaarka ah.
Upstart miyay xogtayda la wadaagtay bixiyeyaashan? Hadday haa tahay, macluumaadkee ayay Upstart wadaagtay?
Adigoo isticmaalaya adeegyada Isbarbardhigga Upstart, waxaad siisay macluumaadka Upstart iyo Guide to Lenders si ay kuugu waafajiyaan bixiyeyaasha ku caawin kara. Waxay ku daraan macluumaadka aad ku siisay codsigaaga hubinta sicirka ee qaybtan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya bixinta amaahda Upstart vs Guide to Lenders amaah bixinta?
Habka hoos ku qoran Upstart waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo dalabyo amaah ah. Amaahdu waxay bixisaa hagaha ku salaysan Amaahiyayaasha ee qaabka hoos qoran ee uu isticmaalo deyn bixiye kasta.
Kaliya waxaan u qalmaa amaah Upstart. Maxay dayn-bixiyeyaasha kale iigu diideen?
Heerarka deymaha bixiyayaasha iyo kuwa kale ee u qalmida lama mid aha kuwa Upstart. Wax xiriir ah kuma lahan mid ka mid ah deymaha kale. Natiijo ahaan, kuma sheegi doonaan sababta ay amaah-bixiyeyaasha kale kuugu oggolaan waayeen.
Waa arrin mudan in la xuso in kasta oo deymaha gaarka ah ee Upstart aysan la imaan astaamo la yaab leh, haddana ay yihiin beddelka dhaqaale-dhakhso leh ee deyn-bixiyeyaasha leh buundooyinka credit-ka xaddidan oo hooseeya.
Sidaa darteed, waxaad isku dayi kartaa haddii aad rajaynayso inaad ka baxdo deymaha ama aad gudato waajibaadyada maaliyadeed ee badan.
Source source: https://time.com/nextadvisor/wp-content/uploads/2021/06/na-upstart-personal-loans-review.jpg
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad naftaada ka saarto xaalad adag ama aad daboosho kharash badan. Aan la hubin…
Sida Fudud Loogu Helo Robux 2022 | Talaabooyinka Fudud ee la Raacayo
Ma jirto qaab xor ah oo aad ku kasbato Robux adigoo ah ciyaaryahan kaliya, laakiin tani macnaheedu maaha inaad...
Soo koobid Buug Faahfaahsan oo ah "Raadi Sababtaada" oo uu qoray Simon Sinek
Qof kastaa wuxuu leeyahay "sabab" gaar ah. Ma aha himilo ama yool mustaqbalka, ee waa qofka aad...